Fiainana tokony hasandatra mandavan’andro ny kolontsaina | Région Boeny
Fiainana tokony hasandatra mandavan’andro ny kolontsaina
4 novembre 2014 A La Une, Actualité
“Omeo aina vao ny hasin’ny Kolontsaina Malagasy, arovy ny harem-pirenena”.
Dinik’asa momban’ny fomban-drazana sakalava, fampisehoana dihy isan-karazany sy moraingy ary fitsidihana ireo trano heva nampirantiana ny asa-tànana avy amin’ny faritra Sofia, Analanjirofo, Atsimo Andrefana ary ny avy atsy Kaomôro no nanamarihana ny herinandron’ny Kolontsaina sy ny Asa-tànana teto Mahajanga, andiany faharoa, izay nampitondraina iry loha-hevitra voalaza etsy ambony iry.
Ny tanjon’ny ministera tompon’andraikitra dia ny hananan’ny Malagasy hambompo ho saro-piaro amin’ny kolontsainy aloha. Fa anisan’ny zava-kinendriny ihany koa ny hamokaran’ireo mpanao asa-tànana malagasy vokatra tsara kalitao hampandrosoany ny tenany, ary avy eo ny firenena.
Homeo hasina ny fomba amam-panao ry tanora, ary adidin-tsika ry ray amandreny no mampatsiahy sy mampianatra izany mba tsy ho very amin’ny kolontsaina avy any ivelany ny taranaka fara-mandimby, hoy Atoa Rabetokotany Eugène, Sekretera jeneralin’ny ministeran’ny Kolontsaina sy ny Vakoka ary ny Asa-tànana. Nanotrona azy tamin’io herinandro fankalazana io ny solontenan’ny Minisim-panjakana miadidy ny Fotodrafitr’asa sy ny Fampitaovana ary ny Fanajariana ny tany, ireo masoivohon’i Frantsa sy Kaomoro. Teo ihany ko aireo manam-pahefana avy eto an-toeran notarinhin-dRtoa Adeline Said Bary, nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra, ny Lehiben’ny distrika ary ny Filohan’ny delegasiona manokan’i Mahajanga.
Tsiahivina fa ny 22 hatramin’ny 26 oktobra lasa teo no nankalazana io herinandron’ny Kolontsaina sy ny Asa-tànana teto Mahajanga io.